Leysin gaari wedid Swiidhan gudeheeda | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Bulsho / Leysin gaari wedid Swiidhan gudeheeda
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24 1 2020
Si baaabuur loogu kaxayn karo gudaha Iswiidhan waa inaad buuxisay 18 sano oo aad leedahay liisanka baabuurka.
Haddii aad haysato laysan baabuur ansax ah oo dal kale waxaad baabuur ku kaxayn kartaa gudaha Iswiidhan xilliga wakhtiga aad tahay magan-gelyo doon. Gudaha Iswiidhan waxaa ka shaqeeya qawaaniinta Iswiidhan. Tusaale ka mid ahi waa inay khasab tahay inaad tahay 18 sano si aad baabuur ugu kaxayn karto gudaha Iswiidhan.
Liisanka baabuurka ee dalka dibediisa
Haddii aad haysato liisanka baabuurka ee dalka dibediisa markaasi waad ku kaxayn kartaa baabuur gudaha Iswiidhan. Waa inaad sidataa marka aad kaxaynayso baabuurk. Liisanka baabuurku waa inuu lahaadaa sawirkaaga. Haddii aanu lahayn wax sawir ah waa inaad sidataa aqoonsi ansax ah. Haddii liisankaaga baabuurku aanu ku qornayn ingiriisi, jarmal ama faransiis waxaa booliisku shuruud kaaga dhigi karaan inaad sidato turjumida liisankaaga baabuurka. Turjumidan waa inay tahay mid la xaqiijiyay.
Haddii aad haysato liisanka baabuurka ee dal ka mid ah Dalalka Wadashaqaynta Dhaqaalaha Yurub* (EES) markaasi wuu shaqaynayaa ilaa inta uu ansax ku yahay dalkii lagu bixiyay. Adigu maaha xitaa inaad u baddasho liisanka baabuurka ee Iswiidhan. Liisankaagan baabuurku wuxuu shaqaynayaa xitaa haddii aad ku jirtid diiwaan-gelinta dadweynaha ee gudaha Iswiidhan.
Miyaa liisankaaga baabuurka lagu bixiyay dal ka baxsan dalalka EES? Markaasi wuxuu ansax ka yahay gudaha Iswiidhan haddii uu ansax ka yahay dalkii lagu bixiyay oo aan weli lagu baddalin ka Iswiidhan. Liisankan baabuurka ansax ma ku aha gudaha Iswiidhan haddii aad diiwaan-gelinta dadweynaha ku jirtay in ka badan hal sano.
*Dalalka EES waa: Beljam, Bulgaariya, Qubrus, Danmaark, Eeslaand, Fiinlaand, Faransiiska, Giriiga, Irlaand, Iiislaand, Talyaaniga, Korowaatiiya, Leetlaand, Layjistayn, Lituwaaniya, Luksimburg, Maalta, Holaand, Noorway, Boolan, Burtuqal, Roomaaniya, Sloofaakiya, Sloofiiniya, Isbayn, Ingiriiska, Jeeka, Jarmalka, Hangari iyo Ostariya.
Codso liisanka baabuurka ee Iswiidhan.
Dhanka Maamulka gaadiidka boggeeda intarnatka waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan in liisanka baabuurka ee dalka dibediisa loo baddalo liisanka baabuurka ee iswiidhishka, in la qaato liisanka baabuurka ee Iswiidhan iyo waxyaabo kale oo badan.
Wixi dheeraad ah ka akhri Maamulka gaadiidka boggooda intarnatka.
Qaadashada liisanka baabuurka ee Iswiishan
Adigu waa inaad si joogto ah u degantahay gudaha Iswiidhan si aad u hesho liisanka baabuurka ee Iswiidhan. Haddii aad doonaysid inaad qaadato liisanka baabuurka waa inaad oggolaansho ansax ah u haysataa inaad barato baabuur kaxaynta ka dibna samaysaa imtixaanka liisanka baabuurka. Tani waxaad ka dalbanaysaa Maamulka gaadiidka.
Wixi dheeraad ah ka akhri Maamulka gaadiidka boggooda intarnatka kuna saabsan waxa ansaxa ah si loo qaato liisanka baabuur kaxaynta.
Lacag ayaa la bixiyaa si loo barto baabuur kaxaynta iyo qaadashada liisanka baabuurka. Tani adigaa iska bixinaya ama dadka qaarkood waxay dalbadaan amaah. Adigu waxaad deynka laysanka baabuurka ka dalban kartaa Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda, CSN haddii aad tahay 18 sano – 47 sano oo aad bilaa shaqo ahayd wakhti cayiman.
Akhri dheeraad ku saabsan deynka laysanka baabuurka kuna qoran CSN boggeeda intarnatka.